Ebumnuche nke usoro mmụta a bụ iji gosipụta mpaghara dijitalụ site na mpaghara dị iche iche yana ohere ọkachamara enwere ike.
Ọ na-achọ ka nghọta ka mma nke ọzụzụ ndị a na-enye na azụmaahịa na ebumnuche nke inyere ụmụ akwụkwọ sekọndrị aka ịchọta ụzọ ha site na usoro MOOC, nke usoro mmụta a bụ akụkụ, nke a na-akpọ ProjetSUP.
Ị nwere mmasị na teknụzụ ọhụrụ? Ị nwere mmetụta eserese? Ị na mgbakọ na mwepụ ọ naghị eru gị ala? Ihe ọ bụla profaịlụ gị, ọ bụchaghị ọrụ dijitalụ emere gị! Bịa chọpụta ha ngwa ngwa site na MOOC a.
Ọrụ dijitalụ iji chepụta ụwa nke echi Ọnwa Iri na Abụọ 17, 2021Tranquillus
GỤỌ Ihe dị mkpa nke otu
gara agaOke osimiri dị n'obi mmadụ
Enweghị m ike ịgbaso mgbanwe mgbanwe ọrụ e nyere m maka onye ọrụ